VAKY BANTSILANA : Mitsambiki-mikipy… | NewsMada
Tsy fantatra intsony amin’izao fotoana izao hoe aiza ho aiza ny laharana misy an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny fandrosoana. Ny mpitondra milaza fa mandroso, ny fari-piainana toa mihemotra hatrany. « Efa tsy ho takatry ny kely vola intsony izao ny atody », hoy ilay hira malaza izay. Toa efa mamokatra ny any Bemolanga nefa ny eo ihany no eo. Ny “vahoaka madinika” tsy mety mitombo, ny “valala mandady harona” toa efa mandady anaty gony.
Mandreza-maimbon’ny fampanantenana natao fony mbola fampielezan-kevitra mihitsy ny daholobe amin’izao fotoana izao. Nolazaina fa ho avy nefa tsy hita manangasanga, malaza tsy hinanana toy lovian-tsahona fotsiny ny fihevotrevorana sy ny fisehosehoana ataon’ny mpitondra. Saika ho isan’andro, tsy hifandrenesana ny anjomaran’ny fiara tsara tarehy entin’ireo manam-pahefana eto. Rariny loatra raha tsy hitany fa misy mahantra eto. Toa mandatsa ireo tsy homana afa-tsy indray mandeha isan’andro.
Ny sarom-bilany anefa tsy mety mipoaka intsony satria efa tapitra namidy avokoa mba hitadiavana hanina satria ny tsinay tsy mba vatsy, ny kibo tsy mba lamosina.
Hisehosehoana lava eto ny amin’ny hoe: “nahazo fanampiana mitentina amina miliara isika avy any amin’ny mpamatsy vola”. Ny tokony ho lazaina izao dia hoe: “ahoana ny fomba hamerenana ireny vola ireny?”, “volan’iza no handoavana izany?”. Ilay volabe amina miliara maromaro izao aiza anefa? Afa-doza tsy ho fola-damosina dieny mbola tanora ny taranaka malagasy hibaby ireo trosa izay nampanantenaina anefa tsy azo.
Mitsambikina ny fitondrana mandeha manerana izao tontolo izao, toa mitsambiki-mikipy ihany anefa. Ny irariana dia ny mba tsy hiafara any anaty lavaka ilay fitsambikinana.